Yakakwira Performance Mota Yefaira Yefaira Pepa 60000 Miles Warranty yeVW AUDI
Nzvimbo Yokutanga: Hunan, China (mainland)
1. Kusvika ku25% Hurefu Hupenyu: Precision yakarukwa uye yakaiswa nekokonati shell chaiyo activated carbon, yedu Breathe Easy kabhini mafirita emhepo anogadzirwa kuti agare kusvika 15,000 mamaira, 25% kureba kupfuura chiyero chekuita kwe12,000 mamaira.
2. 2X Heavier vs. Standard Cabin Filters: Isu tinoshandisa gobvu, maindasitiri simba electrostatic media kukwezva kunyange diki diki zvidimbu uku densely packed activated kabhoni kudzivirira magasi uye hwema kubva kupinda kabhini; shandisa chati yekuenzanisa inowanikwa mumifananidzo yechigadzirwa kuti uone kuti ingani simba rekusefa rauri kupa nekutenga generic kabhini mafirita ane kana asina activated carbon.
3. Nakidzwa neMhepo Yakachena, Yakachena Munyika: Matsvina emumugwagwa, utsi hunopfuta, hwema husina kunaka uye zvinoshatirisa zvinowanzoitika zvinofanirwa kurwisa kuburikidza nematanho akawanda edziviriro usati wasvika mukamba yemotokari yako: (1) Dust Sefa (2) Anti-Inflammatory Sefa (3) Adsorption Sefa. (4) Coconut Shell Activated Carbon Weave Sefa
4. Zviite Iwe pachako: Ndapota ita shuwa kuti usundire sefa nzira yese mukati & chivharo chesefa chichavhara, ita chokwadi chekupinda gore rako, gadzira uye modhi kumusoro kuti utarise kukwana; iyo kabhini sefa iri nyore kutsiva iyo inogona kukuchengetedza mari pachitoro chekugadzirisa; yekuisa bhuku rinosanganisira w/ese odha
5. Sefa Iri Nani pane Yekupedzisira Yako: Tinoziva kuti zvakaoma kusarudza kubva kumhando dzakawanda dzakasiyana dzakatakura chigadzirwa chimwe chete; tinoita kuti zvive nyore kune vatengi vedu kusarudza nechivimbiso chakareruka